Fr. Johnn Adam Schall von Bell, SJ (August 25) | Radio Veritas Asia
Fr. Johnn Adam Schall von Bell, SJ (August 25)
၏ ပျံလွန်တော်မှုခြင်း (၃၅၄)ခုနှစ်မြောက်နေ့ ဩဂုတ်လ ၂၅
ဒီဂျက်ဇွစ်ဘုန်းတော်ကြီး သမိုင်းမှာ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ။ ဘာကြောင့် သူ့ကို သတိရထိုက်တာလဲ။ "သေသောသူ ကြာရင်မေ့" လို့ မြန်မာစကားပုံ ရှိနေပေးမယ့် သူရဲကောင်း၊ ပညာရှိတို့ရဲ့ သမိုင်းကတော့ ထင်ကျန်စမြဲပါ။ ဒါကြောင့် တချို့လူတွေရဲ့ သမိုင်းမှာ လေ့လာ သင်ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဖာသာရ်ယောဟန်အာဒံစချယ် ဗွန်းဘယ်ဟာ ၁၅၉၁ခုနှစ် ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားပြီး ၁၆၆၆ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံ ပီကျင်းမြို့ (Beijing) ပျံလွန်တော်မူ ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သင်္ချာနဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင် ဂျက်ဇွစ် ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ဧကရာဇ်မင်းကြီးက တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ တာဝန်ပေး ခံရပါတယ်။ သူ့အလုပ် ၁၄နှစ်အတွင်းမှာ ကျော်ကြားခြင်းနဲ့အတူ လူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ယောက် ကက်သလစ် ဘာသာထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖာသာရ်စချယ်ဟာ ဂျာမနီကနေ အာရှတိုက်ကို သူသာသနာပြုဖို့ မကာအို (Macao) ဆိပ်ကမ်းကို ၁၆၁၉ခုနှစ်မှာ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဆန့်ကျင်မှုကြောင့်လည်း ဝင်ဖို့ မလွယ်ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် တရုတ်ပြည်ဝင်ဖို့ စောင့်နေရင်း တရုတ်စကားနဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာကို ဆက်လေ့လာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူနဲ့တခြား ဂျက်ဇွစ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ဒတ်ချ်လူမျိုး ကာဗီနီစ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံကြရတဲ့ ပေါ်တူဂီကက်သလစ်တွေကို အောင်မြင်စွာ ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အောင်ပွဲကို သတင်းကြားတဲ့ တရုတ်ဧကရာဇ်မင်းက သူတို့ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူရတဲ့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး တရုတ်ပြည်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့နာမည်ကိုလည်း တရုတ်နာမည် Tang-Jo-Wang အဖြစ်ပြောင်း ခဲ့ပါတယ်။
ဖာသာရ်စချက်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူ၊ စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်တဲ့အပြင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတာကြောင့် တရုတ်လူမျိုးတွေက သူ့ကို ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး ရိုသေလေးစား ကြပါတယ်။ သူ့တတ်ထားတဲ့ ပညာကနေတဆင့် အဆင့်မြင့် တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များနဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်လာကြပြီး တချို့တရုတ် ပညာရှင်များ ကက်သလစ်ဘာသာကို ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်။ သူနဲ့အပေါင်းအဖော် ဂျက်ဇွစ်တွေဟာ ဧကရာဇ်မင်း ပေးထားတဲ့ ပြက္ခဒိန် ပြင်ဆင်ဖို့ တာဝန်လုပ်ဆောင်ရာမှာ အောင်မြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၆၂၉ခုနှစ်၊ နေကြတ်တဲ့အခါ သူ့အဖွဲ့သားတွေက တရုတ်ရိုးရာ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရှင်တွေ ထက်ပိုတိကျအောင် ခန့်မှန်း တင်ပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအောင်ပွဲကနေလည်း အရေးပါတဲ့ ပညာတတ်တချို့ ကက်သလစ်ဘာသာကို ပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။
၁၆၃၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလလမှာ တရုတ်ဧကရာဇ်မင်းက သူတို့အလုပ်အပေါ် လေးစား အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့အတူ တရုတ်ပြည်ရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်း ရေးမှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Peking မှာ ရှိတဲ့ ဂျက်ဇွစ်တွေရဲ့ အဆောက်အဦးအတွင်းမှာ "I, Emperor, praise and protect the teaching from Heaven" အကျွန်ုပ်၊ ဧကရာဇ်မင်း ကောင်းကင်က သွန်သင်ချက်ကို ချီးမွမ်း ကာကွယ်အပ်ပါတယ်" လို့ ကျောက်စာမှာ ရေးထိုးထားခဲ့တယ် သိရပါတယ်။ အဲဒီလို ကျောက်စာဟာ တရုတ်ဧကရာဇ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ချီးမြှင့်တဲ့ ဆုလဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၆၆၄ခာနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသာသနာပြုများကို ကြိုဆိုတဲ့ တရုတ်ဧကရာဇ်မင်း Emperor Shan Chih ရှန်ချင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် သူ့ကိုဆက်ခံသူ ဧကရာဇ်မင်းက သာသနာပြုများကို သံကြိုးတုပ် ထောင်ချကာ မကောင်းဆိုးရွာ သာသနာ ဟူစွပ်စွဲ ညှင်းဆဲခဲ့လေသည်။ ၁၇ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးတွင် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် စုစုပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ယောက်ကျော်၊ ကျောင်းပေါင်း ၂၀၀ ခန့် ရှိခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။
Jesuit missionaries in China: တရုတ်ပြည်ရဲ့သမိုင်းမှာ နာမည်ကြီး ဂျက်ဇွစ်သာသနာပြု တချို့ကတော့ Matteo Ricci, Johann Adam Schall von Bell & Guiseppe Castiglione တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Source: Jesuit History (Fb Page) & Science meets faith
ပီတာ ကလာဗား St. Peter Claver, SJ (၁၅၈ - ၁၆၅၄)
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ဟာ သံတာမော်နီကား၏ ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
လီမာမြို့သူစိန့်ရို့စ် (St Rose of Lima)
St. Alberto Hurtado, S.J, -ရဟန္တာ အယ်လ်ဘတ်ဒို ဟူဒါတို